मन्त्रीबाट हटाइएका दिर्घ सोडारीको सांसद पद अब के हुन्छ ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
मन्त्रीबाट हटाइएका दिर्घ सोडारीको सांसद पद अब के हुन्छ ?
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीबाट बर्खास्त गरिएका दीर्घ सोडारीलाई नेकपाले साधारण सदस्य पनि नरहने गरी निष्कासन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा उनको सांसद पद के हुन्छ ? नयाँपत्रिकाबाट
प्रदेश सरकार र आफ्नै पार्टीबाट साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएका सोडारीको सांसद पद भने रहिरहने भएको छ । नेकपाले कारबाही गरिएको जानकारी गराएपछि भने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा उनको हैसियत ‘स्वतन्त्र सांसद’का रूपमा रहने जनाएको छ ।
प्रदेशका मुख्यन्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले नेकपाको सदस्यबाट निष्कासन गरिए पनि उनी सांसद रहिरहने बताए । ‘आफैं दल त्याग गरेर गएको अवस्था, समानुपातिक सांसद भए अथवा पार्टीले कारबाही गरेर सांसदबाट समेत निष्कासनका लागि संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराए मात्र निलम्बनको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ,’ उपाध्यायले भने ।
नेकपाले कारबाही गरिएको औपचारिक जानकारी संसद्लाई नगराएसम्म उनी सक्तापक्षकै सांसदका रूपमा रहने न्यायाधिवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘कारबाहीको आधिकारिक निर्णय बाहिर आएको छैन । संसद्लाई आधिकारिक जानकारी गराएपछि मात्र सोडारी स्वतन्त्रको हैसियतमा संसद्मा रहनेछन्,’ उनले भने ।
बिहीबारसम्म नेकपाले उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको जानकारी संसद् सचिवालयलाई दिएको छैन । संसद् सचिवालयका सचिव बालाराम शर्माले सांसद सोडारीलाई कारबाही गरिएकोबारे उनको पार्टीबाट कुनै जानकारी नआएको बताए । पार्टीबाट निष्कासित भए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित भएकाले सोडारी सांसद रहिरहने उनको भनाइ छ । ‘पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरेको औपचारिक जानकारी आएपछि सोडारीको हैसियत स्वतन्त्र सांसद हुनेछ,’ शर्माले भने ।
सांसद पद रहन्छ : थापा
नेकपाले पनि सोडारीको सांसद पद रहिरहने जनाएको छ । प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाले उनलाई पार्टी सदस्यबाट मात्र कारबाही गरिएको बताए । ‘पदीय आचरणअनुसार व्यवहार नदेखिएपछि कारबाही गरिएको हो । पार्टी सदस्यबाट मात्र हटाइएकाले उनको सांसद पद रहिरहन्छ,’ थापाले भने ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले सामाजिक विकासमन्त्रीबाट बर्खास्त गरेलगत्तै नेकपाको प्रदेश कमिटीको बैठकले पार्टी सदस्यबाट समेत निष्कासित गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनी कैलाली क्षेत्र नं. ४ ‘क’बाट निर्वाचित भएका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १८० मा प्रदेश सभा सदस्यको पद रिक्त हुनेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसमा ६ वटा बुँदामा उल्लेख गरिएको छ ।
(क) निजले प्रदेश सभाको सभामुखसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,
(घ) निज प्रदेश सभालाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा,
(ङ) जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा,
(च) निजको मृत्यु भएमा ।